Apho kuhlangana i-Asian guy. Ezingaphakathi Iiforam
phambi kokuba uyakwazi ngeposi: cofa i-bhalisa ikhonkco ngasentla ukuqhubeka. Ukuqala kunokwenzeka imiyalezo, khetha iforam ukuba ufuna ndwendwela kwi ukhetho ngezantsi. Molo bonke, ndibe nento yokuba ngathi ukuhlangabezana i-Asian guy, kodwa mna akukwazeki ukufumana ilungelo zephondo apho ukuyenza. Kunokwenzeka budlelwane okanye nje friendship, kodwa ndithetha kuphela isingesi, isijamani kwaye Russian baze baphile kwi-Russia, mna musa ukuthetha ulwimi lwabo (ndithetha mna andikwazi ukufunda hieroglyphs) kwaye yiyo andinaku bhalisa kwi zabo zephondo. Kunjalo, kukho ngamazwe dating zephondo ezikuwo isixhosa kodwa uninzi kubo belong ukuba Americans kwaye baya ikakhulu musa yamkela registrations ukusuka Russians kwaye nkqu ukuba baye kwenza zabo ukukhetha Asian guys, mna basenokuba anomdla kakhulu elilungileyo eliphantsi. Ikakhulu abantu musa ukubonisa umdla kum njengoko andinguye isebenza omnye mom encinane boy leminyaka ubudala, njengokuba nam ukususela Us kwaye njengoko andinguye ukuba ulutsha simemo kwakhona, ndinguye. Mna akukwazeki ukufumana anybody abo babeya ukubhala constantly nkqu nje kuba i-intanethi friendship.
Igama lam ngu Michael, ndiza yakho Afrika scammer ikhangela lonely mhlophe abafazi kwi-intanethi. Mna isithembiso uthando kuwe njengoko ixesha elide njengokuba ufunda shawari kum nge izipho (preferably imali). Mna nento yokuba ndithi kuqala ukufumana uid le ndiza a victim umfanekiso. Mna abaziqondi ukuba ethile, inzala ingakumbi abantu kodwa ukuba ufuna Asians ukuba kakubi, ungakwazi ukwenza ethile, ukukhangela kuzo dating zephondo ndiza ngokuqinisekileyo. Ndiya zama ungamhoyi izimvo ndathola ukusuka abanye idiots apha, Ngoko, njengoko ndatshoyo mna unako ukwenza ukukhangela ngesingesi, kodwa zonke ezi dating zephondo ke susa Russians emva kokuba umntu wachitha ixesha onalo ebhalisiweyo apho. Yiya ku-Japan, Korea, okanye China okanye naphi na apho Asians neplanethi abahlala kuyo nge iphowusta ‘a desperate kwaye nomsindo Russian umfazi ufunzele kuba i-Asian guy’ ngoko ke, ungalibali umzekelo-icatshulwe nisolko a amahlwempu omnye mommy nge ezixabisekileyo ill ubudala gem abo alihoywa unwanted njengoko ukuba ngenxa ubudala, kweli lizwe kwaye somtshato kwaye impumelelo ngokuba wena umnxeba abanye posters apha guaranteed. OH, linda, wena musa nkqu ufuna ukwenza njalo, nisolko sele ngempumelelo kuloo meko lol. Ndiya zama ungamhoyi izimvo ndathola ukusuka abanye idiots apha, Ngoko, njengoko ndatshoyo mna unako ukwenza ukukhangela ngesingesi, kodwa zonke ezi dating zephondo ke susa Russians emva kokuba umntu wachitha ixesha onalo ebhalisiweyo apho. kwaye mna, nento yokuba ngenye caphula into ubhala malunga nezinye posters apha ngentla unqwenela cima ke ukudlala victim uyahlukunyezwa yi – heartless baddies kwi apha. Ukuba uzama ukwenza eyakho mna-athathe semfundo nge-yokubhala humiliating izimvo ke ezingachanekanga umntu ufuna injongo konke oku e njengoko ufuna ukuthumela zonke ezi stupid amazwi ngokuchasene wam eludongeni, andinguye ndihamba ukususa nantoni na ngenxa stupid izimvo apho njengoko ndithe njengoko andizange kukhankanywe ndikuvayo na victim, nje wam iimeko. Abantu apha becinga ngaphandle izinto eziya zange, ngolohlobo. Ngxi ulinde umntu lowo unako ukunceda mna neqabane lam phendla. Hayi anomdla China kwaye japan, ikhethe umntu isikorean. Kwaye ukuba ukhe nto wise okanye eluncedo ukuze kuthi ngokunxulumene wam khangela ke ndiya sebenzisa eyakho iintlobo zonxibelelwano – kuyivala phezulu bitch kwaye shiya wam umsonto. Na esihogweni ufuna zinika kum izikhokelo ukuba ndimele vala wam owakhe umsonto okanye hayi. Molo bonke, ndibe nento yokuba ngathi ukuhlangabezana i-Asian guy, kodwa mna akukwazeki ukufumana ilungelo zephondo apho ukuyenza. Kunokwenzeka budlelwane okanye nje friendship, kodwa ndithetha kuphela isingesi, isijamani kwaye Russian baze baphile kwi-Russia, akunyanzelekanga ukuba bathethe ulwimi lwabo (Ndithetha mna andikwazi ukufunda hieroglyphs) kwaye yiyo andinaku bhalisa kwi zabo zephondo. Kunjalo, kukho ngamazwe dating zephondo ezikuwo isixhosa kodwa uninzi kubo belong ukuba Americans kwaye baya ikakhulu musa yamkela registrations ukusuka Russians kwaye nkqu ukuba baye kwenza zabo ukukhetha Asian guys, mna basenokuba anomdla kakhulu elilungileyo eliphantsi. Ikakhulu abantu musa ukubonisa umdla kum njengoko andinguye isebenza omnye mom encinane boy leminyaka ubudala, njengokuba nam ukususela Us kwaye njengoko andinguye ukuba ulutsha simemo kwakhona, ndinguye. Mna akukwazeki ukufumana anybody abo babeya ukubhala constantly nkqu nje kuba i-intanethi friendship. Molo. Ndiza Stefan kwethu, kwaye ndiza ukusuka isi-indonesian (Asian). Ndiza apha kufuneka umfundi ovela kwelinye ihlabathi zam. Ingaba thina nje kuba i-intanethi-ngabahlobo? Ukuba uzama ukwenza eyakho mna-athathe semfundo nge-yokubhala humiliating izimvo ke ezingachanekanga umntu ufuna injongo konke oku e njengoko ufuna ukuthumela zonke ezi stupid amazwi ngokuchasene wam eludongeni, andinguye ndihamba ukususa nantoni na ngenxa stupid izimvo apho njengoko ndithe njengoko andizange kukhankanywe mna bazive ngathi a victim, nje wam iimeko. Abantu apha becinga ngaphandle izinto eziya zange, ngolohlobo. Ngxi ulinde umntu lowo unako ukunceda mna neqabane lam phendla. Hayi anomdla China kwaye japan, ikhethe umntu isikorean. Kwaye ukuba ukhe nto wise okanye eluncedo ukuze kuthi ngokunxulumene wam khangela ke ndiya sebenzisa eyakho iintlobo zonxibelelwano – kuyivala phezulu bitch kwaye shiya wam umsonto. Na esihogweni ufuna zinika kum izikhokelo ukuba ndimele vala wam owakhe umsonto okanye hayi.
Hayi anomdla China kwaye Ejapan
Akukho ngxaki efumana a iphowusta kunye ‘i-nomsindo, rude kwaye desperate Russian ufunzele nje kuba Koreans. Zange ndinixelele ukuvala yakho umsonto, ubuya hayi nkqu nako, nkqu ukuba ubufuna. Mna musa engqondweni yakho umsonto, nje mna engqondweni yakho attitude Kukho plenty ka-Asians kwi-mpuma Us ayi apho. Zama ukujonga kwi-Russian dating zephondo, izakuba uncedo tremendously yakho imeko, ukuba ngaba asikwazanga kufumana ukuhamba ngaphandle kweli lizwe. Ndicinga ukuba uyakwazi ukufumana ezinye omkhulu guys kuba nawe apho. Mna zithe dating-intanethi kakhulu kwaye isebenza ngokugqibeleleyo kuba kum lonke ixesha.
← Isitshayina Abantu - Isitshayina Boys - Isitshayina Guys
Dating kwi-China baza Kuvuka 'Ze Marriages' →